IPodcast 9 × 04: I-iPhone X iyigqithile i-iPhone 8 | Ndisuka mac
Enye iveki esinayo nonke nonke #PodcastApple esiyenzileyo noogxa bethu kwi-iPhone eyiyo kwaye ngeli xesha sinokuthi umxholo ujolise ngqo kwiimodeli ezintsha ze-iPhone 8.
Intengiso eya kuthi i-iPhone X ithelekise nentengiso yezi iPhone 8 kunye ne-8Plus, iziphumo ezikhutshwe yi-DxOMark kwiikhamera zezixhobo ze-Apple okanye iinguqulelo ezintsha ze-beta ze-macOS, iOS, ii-watchOS kunye ne-tvOS, zezinye zezihloko sithethile ngale nto I-podcast yesine yexesha lesithoba.
Oku nokunye okuninzi esabelana ngako veki nganye kwi-podcast yethu nabo bonke abaphulaphuli abasilandelayo bahlala kunye nabo basimamelayo kwiiyure kamva. Unokwabelana ngemibuzo yakho, amathandabuzo okanye iingcebiso kwinethiwekhi yoluntu iTwitter usebenzisa i-hashtag #podcastapple okanye ushiye uluvo lwakho kweli nqaku. Ngayiphi na imeko, kuyonwabile ukwabelana ngezi ntetho malunga nehlabathi le-Apple nayo yonke into eyirhangqileyo ngaphandle kwexesha elidlulileyo apho sihlala siphila khona.
Asifuni kuthi ndlela ntle ngaphandle kokukhumbula kuqala ukuba ukuba ufuna ukulandela zonke iziqendu zeli xesha lesithoba, kufuneka Rhuma kwisitishi sethu seTunes. Kodwa ukuba, ngokuchaseneyo, ukhetha iYouTube kune ukonwabele ipodcast nganye, kufuneka ume nje umjelo wethu kwaye ubhalise, ukuze ngalo lonke ixesha ividiyo yakutshanje ifumaneke, uya kufumana isaziso ngeakhawunti yakho ye-imeyile okanye ngesicelo seYouTube.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IPodcast 9 × 04: I-iPhone X iyigqithile i-iPhone 8
Ngaba ukufomatha iMac yam kwiMac OS Plus (yeJenali) kwenza ukuba inkqubo entsha ye-APFS?
Isicelo esisemthethweni seTwitter siyanyamalala kwiApple Watch